စမတ် Humidifier, smart မူလစာမျက်နှာ Humidifier, တရုတ်အတွက်ဝိုင်ဖိုင် Humidifier ထုတ်လုပ်သူ
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report ဖေါ်ပြချက်:စမတ် Humidifier,စမတ်မူလစာမျက်နှာ Humidifier,wifi Humidifier,ကြိုးမဲ့ Humidifier,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > စမတ် Humidifier
စမတ် Humidifier ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, စမတ် Humidifier, စမတ်မူလစာမျက်နှာ Humidifier ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, wifi Humidifier R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Ultrasonic Cool မြူခိုးဝိုင်ဖိုင်စမတ် Humidifier
Air တီထွင်မှု Alexa Smart ပျိုးခင်း Humidifier ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Alexa Tuya Smart Cool Mist Ultrasonic Air Humidifier သည်
App ကိုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အတူ Humidifier ခုနှစ်တွင်ခရီးသွားမတ် Plug
အကောင်းဆုံးအနံ့နံပျံ့ Humidifier အမေဇုံ Alexa
Alexa နှင့်အတူအမေဇုံမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ Humidifier
Ultrasonic Cool မြူခိုးဝိုင်ဖိုင်စမတ် Humidifier SMART WI-Fi နည်းပညာ: သင်ဿုံ app တစ်ခု အသုံးပြု. ့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ဒီမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်! သင့်ရဲ့အဆင်ပြေသည်စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet များအတွက်သင့်လျော်သောသော TuyaSmart app ကို Download...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 12.93 - 14.46 / Piece/Pieces
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၇၀ * ၁၇၀ * ၂၅၅ မီလီမီတာ; မာစတာပုံး: 49.5 * 33.5 * 37cm / 12pcs
Google ပင်မစာမျက်နှာ Alexa စမတ်တီထွင်မှု Aroma Air Humidifier Ultrasonic ပျံ့နှံ့တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်လုပ်ကိုင်ရန်လွယ်ကူသည်, အနံ့ရနံ့ရေနံနှင့်ရေကိုထည့်သွင်းရုံခလုတ်ကိုတစ် ဦး နှိပ်နှင့်အတူသစ်သားစပါးကိုဖြန့်ဖွင့်ပါနှင့်လိုအပ်သော mode ကိုရွေးချယ်ပါ။ ultrasonic အနံ့ပျံ့ 4-in-1 စွမ်းရည်ကိုကမ်းလှမ်း။ Aromatherapy...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၇၀ * ၁၇၀ * ၁၇၅ မီလီမီတာနှင့်မာစတာပုံး - 525 * 355 * 370mm / 12pcs
အသုံးပြုသူလက်စွဲနှင့်အတူကျန်းမာရေးဘဝစမတ်အနံ့ခံစက် ၁ ။ သင့်အတွက်တိတ်ဆိတ်ပြီးမွှေးသောအိပ်စက်ခြင်းပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးသည့်စမတ်ပျံ့နှံ့ခြင်း။ ၂။ On-off time နှင့် run time ကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီးသင်နှစ်သက်သောမည်သည့်နည်းကိုမဆိုနှစ်သက်စေသည်။ ၃။ အရောင်ပြောင်းသော LED မီးရောင် ၇ မျိုး၊ တစ်ခုစီသည်မြင့်မား။...
Air တီထွင်မှု Alexa Smart ပျိုးခင်း Humidifier ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ Smart Aroma Diffuser, Scent Diffuser, Ultrasonic Humidifier, Commercial Scent Machine၊ ရွှေအထူးအရည်အသွေး၊ အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်း၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသောကုန်ပစ္စည်းများအားကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်း...
Alexa Tuya Smart Cool Mist Ultrasonic Air Humidifier သည် Home Yoga ရုံးသုံးအိပ်ခန်း Dituo Smart Aroma ပျံ့နှံ့မှု၊ အနံ့အရသာအမျိုးမျိုး၊ Humidifier၊ ပေါင်းစပ်ထားသော ၇ အရောင်ပြောင်း LED မီးအိမ်။ အင်္ဂါရပ်များ: စမတ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့နှံ့မှုနှင့်အလင်းရောင်၏အကောင်းဆုံးသောပေါင်းစပ်မှု။...
Alexa Compatible လုံးလုံးစမတ်ရေမြူစိုထိုင်းဆ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းစမတ်ပျံ့နှံ့နေသော> Alexa, Google နှင့်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိ အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်သီးသန့်ရရှိနိုင်သောကြွယ်ဝသောစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုများ: မြူမှုအဆင့်၊ အလင်းအရောင်နှင့်တောက်ပမှုကိုညှိယူပါ။ အခိုးအငွေ့ကိုဖွင့် / ပိတ်ရန်အချိန်ဇယားဖန်တီးပါ။ Rainbow-spretrum mood light...
အကောင်းဆုံးသစ်သားအစေ့ Smart အိမ်သုံး Ultrasonic စိုထိုင်းဆ ✔️အသိဉာဏ်ဆိုင်ရာကုသမှု - အသိဥာဏ် ရှိ၍ wifi သဟဇာတဖြစ်သောသင်၏စမတ်အိမ်သို့အလွန်ကောင်းသောဖြည့်စွက်ခြင်း။ ၎င်းကိုသာမန် aroma diffuser ကဲ့သို့အသုံးပြုပါသို့မဟုတ်သင်၏ဖုန်းမှ LED အရောင်၊ မြူမှုပြင်းထန်မှု၊ timer ချိန်ညှိချက်များ၊...
လေကြောင်းဆန်းသစ်မှု Eco Friendly စမတ်ရေငွေ့ပျံစိုထိုင်းမှု [Animate] - Alexa နှင့် Google Home နှင့်လိုက်ဖက်သည့်စမတ်ပျံ့နှံ့သူ၊ အသံအမိန့်ပေးပြီးနောက် (Amazon မှအလက်ဇန်းဒါး / ဂူဂဲလ်အကူအညီမှတစ်ဆင့်) သင့်ကိုတုံ့ပြန်ပါ။ [ပြောင်းလဲမှု] - မတူညီသောမြင်ကွင်းအတွက်အရောင်စက်ဘီးသို့မဟုတ်ရွေးချယ်ထားသောအရောင်; အိပ်ရာအခန်းသို့မဟုတ်...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၇၀ * ၁၇၀ * ၂၈၀ မီလီမီတာ; မာစတာပုံး: 52.5X35.5X58cm
Alexa Clean Mist စမတ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီပျံ့နှံ့မှုစိုထိုင်းဆ [အဆင်ပြေသော APP ထိန်းချုပ်မှု] - ဂန္ထဝင်သစ်သားအချောသပ်ပြီးအဆင်ပြေသောအဝေးထိန်းခလုတ်များ။ ဆိုဖာပေါ်တွင်အိပ်ရာထဲတွင်သစ်သားစပါးပျံ့နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ သင်အချိန်ချိန်ညှိခြင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ အလင်းကိုမြူညှိချိန်ညှိခြင်း၊...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၇၀ * ၁၇၀ * ၁၁၅ မီလီမီတာနှင့်မာစတာပုံး - 525 * 355 * 250mm / 12pcs
ခရီးသွားခြင်းအတွက် Smart Life App Diffuser Humidifier Wifi သင်၏ချစ်မြတ်နိုးရသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုခံစားပါ။ DITUO ၏ smart aromatherapy ပျံ့နှံ့မှုသည်သင်၏နေရာကိုလန်းဆန်းစေခြင်း၊ ပြန်လည်နုပျိုစေခြင်းနှင့်သင်၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးမြှင့်စေမည့်အမွှေးနံ့သာများနှင့်ပြည့်နှက်နေစေရန်ဤနေရာတွင်ဖြစ်သည်။...
App ကိုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အတူ Humidifier ခုနှစ်တွင်ခရီးသွားမတ် Plug Alexa နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့ smart အနံ့ပျံ့, 300ml မရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ Adjustments Multi-အရောင်ကို LED ည LightsNotes နှင့်အတူမြူခိုး wifi Humidifier Cool: ရေထဲမှာမတ် humidifier ထား. , အသုံးပြုမှုကိုအပြီးပစ္စည်းကိုတက်သုတ်ပါဘူးပေးပါ။ ရေကိုတိုင်ကီ၏စွမ်းရည်...
ကလေးအိပ်ခန်းများအတွက်မူထူးခြားတဲ့မတ်ဘဝ Humidifier အင်္ဂါရပ်များ & HIGHLIGHTS အသံနှင့် app ကိုထိန်းချုပ် - on / off ကိုဖွင့်ဖို့စမတ် humidifier ပညတ်နဲ့ Amazon ပဲ့တင်သံသို့မဟုတ် Amazon ပဲ့တင်သံအစက်အားဖြင့်သင်တို့၏အသံသည်အားဖြင့်ဦးဆောင်အရောင်များကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ရဲ့ Alexa app ထဲမှာစမတ်နေအိမ်ကျွမ်းကျင်မှုကို...
အကောင်းဆုံးအနံ့နံပျံ့ Humidifier အမေဇုံ Alexa အသံနှင့် APP ကို remote control သင့်ဘဝကိုအဆင်ပြေ: သင်၏စကားသံကိုအားဖြင့် on / off ကိုဖွင့်ဖို့ Alexa နှင့်သဟဇာတဒီအသိဉာဏ်အနံ့ပျံ့။ ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအချိန်မရွေးထိုသို့သောအရောင်အခိုးအငွေ့ mode ကို, အချိန် setting ကိုပြောင်းလဲစေအဖြစ် "EWELINK" App ကို,...
Alexa နှင့်အတူအမေဇုံမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ Humidifier အသံနှင့် APP ကို remote control သင့်ဘဝကိုအဆင်ပြေ: သင်၏စကားသံကို [: သာအင်္ဂလိပ်နှင့်ဂျာမန်အသံထိန်းချုပ်မှုအာရုံစူးစိုက်မှု] အားဖြင့် on / off ကိုဖွင့်ဖို့ Alexa နှင့်သဟဇာတဒီအသိဉာဏ်ပျံ့။ ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအချိန်မရွေးထိုသို့သောအရောင်အခိုးအငွေ့ mode ကို, အချိန် setting...
တရုတ်နိုင်ငံ စမတ် Humidifier ပေးသွင်း
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အိမ်ကိုကြွလာတဲ့အခါ, လေထုအရည်အသွေးသည်အစွမ်းကုန်အရေးပါမှုသည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆောင်းရာသီမိုးလေဝသသင့်အိမ်အတွင်းရှိအခြေအနေများအပေါ်တစ်ဦးသေဆုံးသူကြာပါသည်။ ခြောက်သွေ့သောလေထုကလည်းမလိုချင်တဲ့ငြိမ်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြများနှင့်နောက်လာမည့်တမိသားစုဝင်ထံမှလွယ်ကူသောလွှဲပြောင်းဖို့အအေးနှင့်တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ကိုခွင့်ပြုနိုင်သည်, အသကျရှငျအခြေအနေများမသက်မသာဖြစ်စေခြင်းငှါပေသာ။ စမတ် Humidifier သည်ဤရာသီအလိုက်စိုးရိမ်ပူပန်ရန်လွယ်ကူသောဖြေရှင်းနည်းတခုဖြစ်ပါတယ်။
ကံကောင်းတာက, အ Dituo စမတ်မူလစာမျက်နှာ Humidifier အရင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူသင့်အိမ်ရှိလေထုအရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်စေသည်။ ဤသည် State-Of-The-Art system ကိုသင်တစ်ဦးအဆင်ပြေအဆင့်မှာသင့်ရဲ့လူနေမှုအာကာသအတွင်းရှိစိုထိုင်းဆကိုစောင့်ရှောက်ဘယ်လို redefines ပါလိမ့်မယ်။
ထိုကဲ့သို့သောစမတ်နည်းပညာအဖြစ်ဆန်းသစ် features တွေ, အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ထူးခြားသောပုံစံဒီဇိုင်းနှင့်အတူ, ဒီ wifi humidifier ဆိုအိမ်ထောင်စုတစ်ခု-ရှိရမည်ထို့အပြင်အဖြစ်စားသုံးသူများကကြေညာလျက်ရှိသည်။
တစ်ဦးကအဆင်ပြေပြေနဲ့အခမဲ့ app ကိုသင်အဆင်ပြေသင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုအိမ်မှာလေထုအရည်အသွေးကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်မဆိုလိုတာကအသုံးပြုသူများသည်အခန်း humidifiers ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပြုထားသည်။ [စမတ်ဘဝများအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့် "အသုံးပြုသူများသည်ကိုလည်း Google ကနေအိမ်သို့မဟုတ်အမေဇုံ: Echo ဤကြိုးမဲ့ humidifier ချိတ်ဆက်အပေါ်နဲ့ off system ကိုဖွင့်ဖို့အသံဖြင့်ထိန်းချုပ်ကိုသုံးနိုင်သည်။
အသုံးပြုသူတစ်ဦး-ဖော်ရွေလုပ်ဆောင်ချက်ကိုနှင့်အတူ, ဒီလေထု humidifier ၏ကြော့မော့နှင့်ခေတ်မီဒီဇိုင်းကသင့်အိမ်ပုံစံမျိုးမှငြိမ်းချမ်းသောနဲ့လှပတဲ့ထို့အပြင်စေသည်။ လေသံတိုးတိုး-တိတ်ဆိတ်ကြောင့်သင့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းသံသရာနှောင့်ယှက်ခြင်းမရှိဘဲသင့်ရဲ့အိပ်ခန်းထဲမှာလေကောင်းလေသန့်စင်။ ဤသည် ultrasonic humidifier လည်းသင်အကြိုက်ဆုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ၏နှစျသိမျ့နှင့်စိတ်ပြေလျော့အနံ့နှင့်သင်၏လူနေမှုနေရာများဖြည့်တစ်ဦးကရေနံပျံ့အဖြစ်လည်ပတ်သော။ နှစျသိမျ့ရောင်စုံမီးလုံးသင်တို့ကိုလည်းဖြေလျော့ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုပျောက်အရည်ပျော်ကုန်အံ့ခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦး spa ကဲ့သို့အတွေ့အကြုံကိုပေးနေချိန်မှာ children`s ခန်းနှင့်ပျိုးခင်းများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်လုံလောက်သောကို Safe, ဒီအိမ်မှာ humidifier အအေးနှင့်တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ကနေဘေးကင်းလုံခြုံသင့်မိသားစုစောင့်ရှောက်မည်။
စမတ် Fog Humidifier